Edinson Cavani oo saddex kulan la ganaaxi karo kaddib guushii soo laabashada lahayd ee uu shalay ku hoggaamiyey Kooxdiisa Manchester United – Gool FM
(Manchester) 30 Nof 2020. Weeraryahanka Manchester United ee guusha soo laabashada ah ku hoggaamiyey kooxdiisa kulankii Southampton ee Edinson Cavani ayaa saddex kulan la garaaxi karaa kaddib markii uu qoraal cunsuriyadi ka muuqato soo dhigay bartiisa Instagram-ka.
Sida wararku ay sheegayaan guddiga anshax marinta xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa bilaabay baaritaan ku aaddan qoraal uu Instagram-ka soo dhigay xiddiga reer Uruguay kaddib markii uu gool dhiibay labo kalena dhaliyey ciyaartii ay shalay 3-2 kaga adkaadeen Southampton oo labo gool la horreysay.
Waxa uu Cavani oo u jawaabayey taageere kala soo xiriiray Instagram-ka uu u qoray eray loo arkay inuu yahay mid cunsurinimo ah, kaasoo la sheegayo inuu Weeraryahanka Man United ku muteysan karo ganaax saddex kulan ah.
Taageeraha ayaa markii hore Cavani u soo qoray ‘Asi te queiro Matador’ taasoo ah Af-isbaanish micnihiisu yahay: “Waan ku jeclahay, Matador”.
Yeelkeede, Cavani ayaa ugu jawaab celiyey Instagram Story, isagoo soo dhigay qoraal u dhignaa “Gracias Negrito!” taasoo macnaheedu yahay: “Mahadsanid madowgii yaraa!”.
Si kastaba ha noqotee, 33-sano jirkaan weerarka uga dheela Manchester United ayaa tirtiray sawirkii uu qoraalka ku soo dul qoray, kaasoo uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka gaar ahaan qeybta Story-ga.
Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA iyo Kooxda Manchester United midna kama hadlin arrintan, laakiin warbaahinta intooda badan ayaa warinaya in Cavani uu wajihi karo ganaax saddex kulan ah.
Weeraryahankii hore ee Kooxda Liverpool, Luis Suarez, kaasoo ay Cavani ka wada tirsan yihiin xulka Uruguay ayaa lagu xusuustaa in lagu ganaaxay siddeed kulan inuu ereyga ‘negrito’ u adeegsaday daafacii hore ee Man United Patrice Evra sanadkii 2011-kii.
Cavani oo kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford beeca xorta ah ugu soo biiray bishii October ayaa dhaliyey saddex gool shan kulan oo uu kursiga keydka ka soo kacay horyaalka Premier League.